In-rev systems ले भर्खरै GT Blind Search नामक पेज लन्च गरेको छ । Search Engine Comparator को स्लोगन सहित आएको GT Blind Search ले search रिजल्ट कम्पेयर गर्छ ।
तपाईको सबैभन्दा मन पर्ने सर्च इन्जिन कुन हो ? Google, Bing या Yahoo ? अहिले नै भन्नु भो, भने Google भन्न सक्नुहुन्छ तर GT Blind Search बाट Search Engine Compare गर्नु भो भने, तपाई को choice फरक हुन सक्छ । सम्भवत: तपाईले आफ्नो सर्च इन्जिन नै बदल्न सक्नुहुन्छ ।
तपाइलाई मन पर्ने search engine को रिजल्ट तपाईलाई मन पर्दोरहेछ कि रहेनछ, त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्छ, GT Blind Search को माध्यमबाट ! अथवा या भनौँ, तपाईलाई सबैभन्दा मन परेको नतिजा को आधार मा तपाई ले आफ्नो सर्च इन्जिन यो रहेछ है भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
GT Blind Search ले ३ वटा सर्च इन्जिन को नतिजा दिन्छ । Google, Bing र Yahoo को search नतिजाहरु तपाई ले एकैठाउँ मा पाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईलाई रमाइलो गर्न मन छ या आफ्नो सर्च इन्जिन को बारेमा जान्ने मन छ भने, GT Blind Search मा जानुहोस् । अनि त्यहाँ जुनसुकै कुरा टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस् । त्यहाँ ३ वटा कोलम मा सर्च का नतिजाहरु निस्कनेछन् । त्यसपछि तपाई ले गेस गर्नुपर्नेछ, तपाई को सर्च इन्जिन को बारेमा ! तपाईलाई सबैभन्दा मन परेको नतिजा का आधार मा, तपाईले आफ्नो सर्च इन्जिन छान्न सक्नुहुन्छ । अनि रमाइलो कुरा, तपाई ले सोचेर छान्नु भएको सर्च इन्जिन, अरु नै पर्न सक्छ ।
अब गर्ने हैन त रमाइलो ? आफ्नो सर्च इन्जिन कुन रहेछ थाहा पाउने हैन त ?
Dilip Acharya March 24, 2010 at 8:44 PM
रमाइलो रहेछ यो सर्च इन्जिन !।
आफ्नै नाम लेखेर सर्च गरेर हेरेको, आफूलाइ मनपर्ने सर्च ईन्जीन त अर्कै परेछ । झुक्यायो पो !!